जनार्दन शर्मा भने : उसोभए प्रदेश र स्थानीय तह भंग गरौं ? – Life Nepali
जनार्दन शर्मा भने : उसोभए प्रदेश र स्थानीय तह भंग गरौं ?
काठमाडौँ। पूर्वगृहमन्त्री एवम् नेकपा सांसद जनार्दन शर्मा (प्र,भाकर)ले संघीयता कार्यान्वयनमा इमान्दार प्रयास नभएको बताएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिप्रति केन्द्रबाट अविश्वासपूर्ण व्यवहार भएको भन्दै उनले आ,क्रोश पोखे । राज्य व्यवस्था तथा सु,शासन समितिको आइतबारको बैठकमा आ,क्रोशित हुँदै शर्माले संघीयता कार्यान्वयनको बाटो नखोल्ने हो भने प्रदेश र स्थानीय तह भं,ग गरिदिए हुने बताए । उनले भने, ‘हामी यहाँ प्रतिनिधि छौं भने तलका प्रतिनिधि जनताबाट निर्वाचित होइनन् ?
तिनमा जनताको विश्वास छैन ? तिनीहरु राष्ट्रप्रति इमान्दार छैनन् ? हामीमात्र इमान्दार छौं ? त्यसो भए संघमात्र राखौं न त किन चाहियो तल (प्रदेश र स्थानीय तह) । सबै भंग गर्दिऔं ।’ बैठकमा संघीय नि,जामती सेवा विधेयकका टुंगिन बाँकी विषयमा छलफल भएको थियो । प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अ,धिकृत संघको हुने कि प्रदेशको भन्ने विषयमा छलफल भए पनि टुं,गो नलागेपछि समितिको बैठक यही चैत पाँच गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।
समिति सचिवालयले प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्र,शासकीय अ,धिकृत सम्बन्धित तहको हुने गरी प्रस्ताव तयार पारेको छ । सांसदहरुबीच मत बाझिएपछि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हृदयश त्रिपाठीले यो विषयमा आफूले रा,जनीतिक तहमा पनि” छलफल गरिरहेको जानकारी गराउँदै थप समय मागेका छन् । छलफलमा भाग लिँदै ने,कपा सांसद शर्माले प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्बन्धित तहकै हुनुपर्ने भन्दै समितिले ल्याएको प्रस्तावको समर्थन गरे । उनले यो प्रस्तावको वि,रोध गर्नेहरु संघीयता कार्यान्वयनमा इमान्दार नभएको समेत बताए ।
Previous प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त’त्काल रा’जीनामा दिएर आ’राम गर्नुपर्छ- पशुपतिशमशेर
Next आजबाट डा.भीम रावल